Izinhlelo zokusebenza ezi-8 ezinhle kakhulu zamaphephadonga ze-Android | Izindaba zamagajethi
Izinhlelo zokusebenza eziyi-8 ezinhle kakhulu zamaphephadonga ze-Android
AmaVillamandos | | Android, AmaSelula, Software
I-Android uhlelo olusebenzayo olusivumela ukuba senze ngezifiso kunoma iyiphi idivayisi, ngokungangabazeki ethakazelisa kakhulu kunoma imuphi umsebenzisi. Enye yezinto esivumela ukuthi siyenze ngokwezifiso iphephadonga, esingakhetha kulo enye yalezi zinto ezilethwa yidivayisi ngokuzenzakalela noma zikwenze ngokunye kwezicelo eziningi zephephadonga ezitholakalayo.
Ngokuqondile ngalezi zinhlobo zezicelo esifuna ukukhuluma nawe namuhla nangemva kosesho esilukhethile Izinhlelo zokusebenza ezi-8 ezinhle kakhulu zangemuva ze-Android, okungasivumela ukuthi sibe nephepha lodonga ledivayisi yethu ngendlela esiyithandayo futhi eyenziwe ngezifiso ngokuphelele.
Uma ungazi ukuthi iyiphi i-wallpaper ongayifaka ku-Android yakho, qhubeka ufunda futhi ubheke lezi zinhlelo zokusebenza ezizokuvumela ukuthi ushintshe iphephadonga lakho cishe nsuku zonke, ukwazi ukukhetha elihle, elihlekisayo noma elincibilikisayo.
2 Izithombe zokuqala
4 Iphephadonga Elibukhoma Elibukhoma
5 Izithombe ezinhle ze-HD
8 Izithombe ze-HD ze-PicSpeed
Isikhathi eside I-Zedge Kube ngolunye lwezinhlelo zokusebenza ezilandwe kakhulu ku-Google Play noma okufana nakho, isitolo sohlelo olusemthethweni. Ngenxa yenani elikhulu lamaphephadonga we-Android elisinikeza lona, ​​ngaphezu kokunye ukwenza ngezifiso, likwazile ukunqoba inani elikhulu labasebenzisi.
KuZedge singasesha phakathi kwezinkulungwane zephephadonga ezitholakala ngezigaba ezahlukahlukene noma senze usesho kwethemu ethile. Ngaphezu kwalokho, phakathi kwemisebenzi lolu hlelo lokusebenza oluthokozisayo olusinikeza yona ukukwazi ukusetha ushintsho oluzenzakalelayo lwephepha lodonga lethu phakathi kokuningana. Ngalokhu, ngeke kudingeke ukuthi sihlale sinephepha lodonga elifanayo futhi ngeke kudingeke sikhathazeke ngokuthi sizolishintsha ngezikhathi ezithile.
Ukwenza lolu hlelo oluthandekayo, kufanele sikutshele ukuthi lungalandwa mahhala. Ungasebenzisa isixhumanisi ozosithola ngezansi ukusilanda njengamanje kudivayisi yakho.
Amaringithoni we-ZEDGE ™ nezizinda
Igama lesicelo, Izithombe zokuqala, Isivele isisinikeza izinkomba eziningi zalokho esizokuthola nokuthi lokho kube lula ifulegi laso, yize lokhu akusho ukuthi singayeka ukufinyelela iqoqo elikhulu lezithombe esingazibeka ngendlela elula njengephepha lodonga idivayisi yethu ye-Android.
Ngenxa yalolu hlelo lokusebenza Singakhetha imiklamo ekusatshalalisweni kweLinux OS Luna futhi siyisebenzise ku-smartphone noma ithebhulethi yethu njengephepha lodonga. Izinhlobonhlobo njengoba sesivele sishilo zibanzi futhi zonke izithombe, ngaphezu kokuba semthethweni ngokuphelele, zinhle impela.
Lokhu kungenye yalezo zinhlelo zokusebenza ezingatholakali ukuthi zilandwe esitolo esisemthethweni se-Google, kepha futhi futhi ayikho ingozi yokuyilayisha kudivayisi yakho, inqobo nje uma ungayenza kusukela kusixhumanisi esikunikeza yona ngakho ngezansi .
Landa amaphephadonga aqalayo LAPHA
Okunye kokubi okukhulu esikuthola cishe kunoma iyiphi idivayisi ye-Android ukuthi ezinye izithombe, ezithathwe ngekhamera, azikwazi ukwenziwa kahle njengephepha lodonga. I-Wallpapyrus isivumela ukuthi sikhethe noma yisiphi isithombe kusuka kugalari yethu bese siyikhetha njengephepha lodonga, ngaphandle kokuthi sikusike ukwenza inguqulo yaso enezingqimba noma emi mpo.
Lokhu kusombulula inkinga engathandeki abasebenzisi abaningi abahlupheka ngayo nsuku zonke, futhi futhi kube nemiphumela emihle kakhulu ngokungafani nezinye izinhlelo zokusebenza ezifanayo.
Iphephadonga Elibukhoma Elibukhoma
Njengoba igama layo lisho, nge Iphephadonga Elibukhoma Elibukhoma Sizokwazi ukusungula amaphephadonga amaningi, ikakhulukazi eyodwa kwesikrini ngasinye, futhi ngaleyo ndlela sibe nezinhlobonhlobo zamaphephadonga kusikrini ngasinye esinaso noma esisisebenzisa kaningi.
Izithombe zingakhethwa kulabhulali enkulu isicelo esisinikeza yona, kodwa futhi nakugalari yethu. Phakathi kwezinketho ezithakazelisa kakhulu ezinikezwa uhlelo lokusebenza sithola i- pamathuba okusungula isikhwama ngasinye isikhathi esithile.
Vele, kufanele ngikutshele ukuthi ngemuva kokuzama lolu hlelo lokusebenza kudivayisi yami ye-Android, ngigcine ngifikelwa yisiyezi futhi ngibona isithombe esikrinini ngasinye esisitholayo singagcina sihlanya, ikakhulukazi uma singasijwayele. . Uma kungabalulekile ukuthi ubone isithombe esikrinini ngasinye noma usithande, iMultipicture Live Wallpaper kufanele kube isicelo sakho seheda.
Izithombe ezinhle ze-HD
Ama-Wallapapers HD Apholile kungenye yalezo zinhlelo zokusebenza okungafanele zilahleke kunoma iyiphi idivayisi enohlelo lokusebenza lwe-Android futhi yenza inani elikhulu lamaphephadonga litholakale kunoma yimuphi umsebenzisi, ngokulungiswa kwe-HD.
Kuzosivumela nokuthi sibeke noma yisiphi isithombe esivela kugalari yethu njengephepha lodonga, ngendlela elula futhi sikwazi ukujwayela usayizi waso nganoma yisiphi isikhathi.
I-Kappboom - Izithombe ezinhle nezithombe ze-HD
Umthuthukisi: Kappboom Inc.
I-Wallbase kungenye yalezo zicelo ezigqame ngaphezu kwakho konke ngenxa yokulula kwazo, nokungazenzi zibe nzima izimpilo zethu ngokuthile okulula njengokukhetha iphepha lodonga. Umtapo wezithombe walolu hlelo lokusebenza uyathandeka futhi singakhetha iphepha lodonga lethu phakathi izithombe ezingaphezu kwesigidi zonke izinhlobo.
Ukuze ungalahleki phakathi kwezithombe eziningi kangaka, singasesha esikufunayo ngokuseshwa ngezigaba ezahlukahlukene noma amagama asemqoka.
Kunjalo uhlelo lokusebenza lungalandwa mahhala ngokuphelele futhi akufanele ukhathazeke nganoma yisiphi isikhathi ngemvelaphi yezithombe ngoba zingezesisekelo sesithombe segama elifanayo nesicelo. Akunasidingo sokusho, indawo esemthethweni ngokuphelele.
Base, HD Wallpapers Khulula
I-Blurone Kungenzeka kungenye yezinhlelo zokusebenza ezinelukuluku kakhulu esingazilanda kudivayisi yethu ye-Android esingabeka kuyo iphepha lodonga, yebo, lihluke kakhulu kulokho esikujwayele. Futhi ingabe lolu hlelo lokusebenza Izosivumela ukuthi sisebenzise imiphumela yokufiphaza kunoma yisiphi isithombe futhi ushintshe ngokuphelele isithombe sokuqala.
Ukuze sibanikeze imiphumela esiyifunayo singasebenzisa noma yiluphi uhlelo lokusebenza, noma olulodwa oluthathwe ngekhamera yedivayisi yethu. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuthi wabelane ngendalo yethu ngokusebenzisa amanethiwekhi ahlukahlukene omphakathi.
I-Blurone: Iphephadonga le-Blur effect & dock
Umthuthukisi: ITUJING TECH
Izithombe ze-HD ze-PicSpeed
Uma okufunayo ukuthi ube nesithombe sangemuva ku-Android yakho, ngesinqumo se-HD esigcwele esingu-1080p, inketho engcono kakhulu yokukufeza ukusebenzisa uhlelo lokusebenza Izithombe ze-HD ze-PicSpeed. Kuyo uzothola eyodwa okungenzeka ukuthi yinkulu kakhulu iqoqo lesithombe esiphezulu, nazo esezivele zashintshwa ngokwesayizi.
Ngeshwa ayitholakali nge-Google Play, kepha isincomo sethu ukuthi ungayilanda ngaphandle kokwesaba. Ngaphezu kwalokho, ukuvala izinketho ezikunikezayo, uzothola ukuthi kungenzeka ukuthi unqampule, ujikeleze noma ushintshe usayizi wezithombe ezitholakalayo, ngabe udinga noma yini enye ukuyilayisha ngokushesha?
Landa i-PicSpeed ​​HD Wallpapers LAPHA
Yiziphi izinhlelo zokusebenza ovame ukuzisebenzisa ukukhetha nokubeka amaphephadonga wedivayisi yakho ye-Android?. Sitshele esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi esikhona kuwo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Izinhlelo zokusebenza eziyi-8 ezinhle kakhulu zamaphephadonga ze-Android
I-Android yawo wonke umuntu; Yini i-bootloader?